Bonded Warehouse တွေအကြောင်း သိပြီးပြီလား ? | Super Light Logistics
Bonded Warehouse တွေအကြောင်း သိပြီးပြီလား ?
Bonded Warehouse ဆိုတာကတော့ အဆောက်အဦးတစ်ခု (သို့) အခြား လုံခြုံစိတ်ချရသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အဆောက်အဦး/နေရာတွင် အခွန်အခပေးဆောင်ရမည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို အခွန်အခ ပေးဆောင်ခြင်းမပြုပဲ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း (သို့) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်နေရာဖြစ်ပါသည်။
Bonded Warehouse များ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကို နိုင်ငံတော် (သို့) ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ပဲ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ယူသည့် Bonded Warehouse များမှာတော့ အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ စာချုပ်တစ်ရပ်ကို အစိုးရနှင့် ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
သိုလှောင်ရုံအတွင်းသို့ ကုန်ပစ္စည်းများ စာရင်းသွင်းဝင်ရောက်မှုအပေါ်တွင် ကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းသူနှင့် သိုလှောင်ရုံပိုင်ရှင် (သို့) တာဝန်ခံတို့အကြား တာဝန် ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍လည်း အဆိုပါ သိုလှောင်ရုံ အမျိုးအစားကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ပစ္စည်းများ အပ်နှံထားရှိနိုင်သည့် သိုလှောင်ရုံ Bonded Warehouse ဟု ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
Bonded Warehouse အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများ ထိန်းသိမ်းထားရှိချိန်တွင် အကောက်ခွန်တာဝန်ရှိသူများ၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းများ သန့်ရှင်းခြင်း ၊ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း ၊ပြန်လည်ထုတ်ပိုးခြင်းစသည့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကို လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လိုအပ်သည့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှု ဆောင်ရွက်ထားရသည့် ကုန်ပစ္စည်းများအား ပြန်လည် ထုတ်ယူချိန်တွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးရသည့် အခြေအနေအပေါ်မူတည်၍ ကျသင့်သည့် စရိတ်စကကို ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
Bonded Warehouse များတွင် သိုလှောင်ထားရှိသည့် ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူမည့်သူထံ လွှဲပြောင်းပေးပို့ရန် ထုတ်ယူသည့်အချိန်အထိ မည်သည့် အခွန်အခမှ ပေးဆောင်ရန် လိုမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း Bonded Warehouse များတွင် အပ်နှံထားရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်များကို လျှော့ချသတ်မှတ်ခြင်း ၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းများကို လုံးဝခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပေ။
#SuperLight #Logistics #Knowledge #Bonded_Warehouse